GERMANY – Garsoore Sports
Mid ka mid ah weeraryahannadii ugu weynaa taariikhda kubbadda-cagta ayaa geeriyooday subaxnimadii Axadda. Halyeeygii xulka Jarmalka iyo kooxda Bayern Munich Gerd Muller ayaa geeriyooday isagoo 75 jir ah. Weeraryahankan oo ku guuleystay Koobka Adduunka iyo…
TOOS: Gladbach vs Bayern | Bundesliga Matchday 1
Gladbach vs Bayern – Carabi Gladbach vs Bayern – Ingiriis/luuqado kale Gladbach vs Bayern – Carabi
Erling Haaland ayaa qirtay inuu “ka xun yahay” in Jadon Sancho uu ka tagay Borussia Dortmund kaddib markii garabka reer England uu u saxiixay Manchester United xagaagan. Sancho ayaa dhammeystiray heshiis £72.9 milyan oo uu…
Tababaraha cusub ee Allianz Arena ayaa shaaca ka qaaday in ciyaaryahankan khadka dhexe uu ku jiro qorshihiisa xilli ciyaareedka soo socda iyadoo la saxaafadda la isla dhexmarayo sheekooyin ku saabsan mustaqbalkiisa Tababaraha kooxda Bayern Munich…
Kooxda kubadda-cagta ee Olombikada Jarmalka ayaa garoonka ka baxday iyadoo shan daqiiqo keliya ay ka harsan tahay ciyaarta kaddib markii aflagaado la sheegay in loo geystay daafacooda 23 jirka ah. Ciyaartii saaxiibtinimo ee kooxda Olombikada…
Kooxda Borussia Dortmund ee dalka Jarmalka ayaa iska diiday dalabkii ugu horreeyay ee ay kooxda Chelsea ka gudbisay weeraryahankeeda Erling Haaland sida ay baahisay Sky Germany. Chelsea ayaa u soo bandhigtay Dortmund midkood Tammy Abraham…
Dortmund Oo €200 Milyan Duldhigtay Erling Haaland
Borussia Dortmund ayaa lagu soo waramayaa inay kordhisay dalabyadooda iyagoo isku dayaya inay ceshtaan Erling Haaland. Erling Haaland ayaa ku riyaaqay olole cajiib ah oo u kooxdiisa Borussia Dortmund la qaatay, isagoo ku kasbaday xiisaha…
Kabta dahabka ah qaaradda Yurub xilli-cayaareed kasta waxaa la siiyaa cayaaryahanka ugu dhibcaha badan. Dhibcaha waxaa la xisaabiyaa iyadoo lagu saleynayo tirada goolasha ay cayaartoodaas ka dhaliyeen horyaaladooda. Isku-dheellitir la sameeynayo ayaa waxaa lagu saleynayaa…
Hansi Flick ayaa la xaqiijiyay inuu yahay macalinka cusub ee Jarmalka kaddib markii uu saxeexa6 heshiis seddex sano ah. Flick, oo ku hogaamiyay Bayern Munich horyaalkeedii sagaalaad oo isku xigta ee Bundesliga xilli ciyaareedkan, ayaa…
Weeraryahanka Bayern Munich Robert Lewandowski ayaa caddeeyay inuu ka fiicanyahay Cristiano Ronaldo iyo Lionel Messi, sida laga soo xigtay Karl-Heinz Rummenigge oo ah guddoomiyaha kooxda Bayern Munich. Xiddiga reer Poland ayaa dhigi kara rikoorka Bundesliga…